Galmee barruu kessatti handaaraa hiika fayyadamaa
Gabatee guutuu ykn gabatee barreessatti man'ee filaman kessatti handaaraa man'ee akaakuu adda addaa fayadamu nidandessa. Wantoota kabiroon galmee barruu kessatti handaaraa hiika fayyadamaa kaabaachu danda'aa. Fakkeenyaaf handaaraa gara Akkaataa fuula, goodayyaaf fakkiilee ykn taattoota saagamanitti ramadu nidandessa.
Gabatee barreessatti garee man'ee ykn man'ee fili.
Qaaqa irrati caancala Handaaraa cuqaasi.
Filannoo handaaraa wara fayyadamu barbaadu filitti Tole cuqaasi.
Filannoon naannoo Qindaa'ina sararaa keessaa, akkaataawwan handaaraa hedduudhaaf fayyaduu dandaa'a.
Filannoo man'een Hundaahuudhaan, naannoon garaagara fakkaata.
Naannoo qindaa'ina sararaa
Gabatee tokko keessaa hamamtaa man'ee tokkoo isa caaluu, man'een tokko filatamuu, ykn qareen gabatee tokko keessa ooluu, ossoo man'ee hinfilatiin
Gabatee man'ee tokkootti, man'een filatameera
Man'eewwanii tarjaa keessaa filaatamaniiru
Man'ee tarree kessatti filaman
Gabatee guutu 2x2 ykn man'ee chala filaman
Handaara hedduu haaromsuf ykn qindeessuf sajoo Durtii irratti cuqaasi.
Sarara fajajaa qal'aa sajoo kessa, handaaraa wara haaromu ykn haqamu agarsiisa
Sarara dukkana sajoo kessa, sarara wara halluufi Akkaataa sarara filaman qindeessaa fayyadaman agarsiisa.
Sararootii fajajaa furdaa, sajoo sararootaa wara hin jijjiiramne agarsiisa.
Garee man'ee 8x8 kan ta'u fili, Dhangii - Man'eewwan - Handaaraalee fili.
Sarara mara haquf sajoo bitaa cuqaasi. Kun handaaraa haaraa alaa marafi sarara keessaa mara haqa.
Sarara kabiroo mara haquf handaaraa alaa qindeessuf sajoo issa lammataa gara bitaa cuqaasi.
handaaraa alaa qindeessuf sajoo issa mirga moggaa cuqaasi. Sarara keessaa hin Jijjiiramu
Amma sarara kam kabiroo keesatti qindaa'e ykn haqeme ilaalu nidandessa.
Qindaa'inoota hiika fayyadamaa
Naannoo Hiika Fayyadamaa irratti, cuqaasun sarara kophaa haqu ykn qindeessuu nidandessa.
Haala garagara sadii kessatti jijjiirruuf xiyyoo ykn qarqara keessa-deebi'uun cuqaasi.
Sararrii gurrachii, sarara walitti dhufoo kan man'eewwan filatamanii qindeessa. Yammuu ati akaataa sarara 0.05 pt filatu, sararrii akka sartuqaatti mul'ata. Sararootii dachaan, yammuu ati akkaataa sarara dachaa filattu mul'atu.
Sararrii fajajaan, yammuu sarara walitti dhufoon kan man'eewwan filatamanii hinjijjiiramneedha. Bakka kanatti sararii qindaa'uu ykn haqamuu hinjiru.
Sararii adiin kan mullatu, yammuu sararii walitti dhufoon man'eewwan filatamanii haqamuudha.
Akkaataa sarara furdaa fili.
Handaaraa gadi qindeessuuf, hamma sarara furdaa ilaaltutti qarqara gadi keesa-deebi'uun cuqaasi.
Mara man'ee gabatee barreessa keessatti yoo xinnaate sarara bitaaf gadi durtiin qabu. Man'ee baay’ene marsa gabateen sarara dabala durtiin fayyadama.
Sarara mara wara durargii irratti adiin mullatu man'ee irra nihaqamu.
Handaarawwan maadhee keessatti fayyadamaan qindaa'an
Title is: Galmee barruu kessatti handaaraa hiika fayyadamaa